सदरमुकामकै वडामा छैन आधारभूत तहको विद्यालय, उदयपुर साक्षार जिल्ला घोषणा हुँदै
उदयपुर, फागुन ५
नगरपालिका भनेपछि सामान्यतया आधारभूत पूर्वाधारको सुविधा हुनु पर्ने हो । भौतिक संरचना पनि हुनुपर्ने हो । तर, उदयपुरको सदरमुकाम त्रियुगा नगरपालिकाको एक वडामा आधारभूत तहको विद्यालय समेत छैन ।
यहाँका विद्यार्थीहरु आधारभूत तहको अध्ययनका लागि छिमेकी वडाहरुमा जान बाध्य छन् । त्रियुगा नगरपालिकाको १२ नम्बर वडामा एउटा पनि आधारभूत विद्यालय नहुँदा यहाँका बालबालिकाहरु आधारभूत तहको अध्ययनका लागि छिमेकी वडाहरु वडा नं. ३, ११ र १३ का वडाहरुमा रहेको विद्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
त्रियुगा नगर शिक्षा प्रमुख अर्जुन कार्कीका अनुसार त्यस वडामा सरकारी लगानीबाट संचालित विद्यालय भएपनि मुस्लिम समुदायको विद्यार्थीहरु बाहेक अन्य समुदायका विद्यार्थीहरुको पहुँच नभएको बताए । उनका अनुसार कक्षा ५ सम्मको मदरसा तजविदुल कुरान आधारभूत विद्यालय संचालनमा रहेको छ । त्यस विद्यालयमा दुई जना शिक्षकको दरबन्दी रहेको भएपनि अन्य समुदायको पहुँच छैन् ।
कोशी हेल्थ एण्ड साइन्स क्याम्पस विराटनगरका विपिएच पाँचौ सेमेष्टरका १५ विद्यार्थीहरुले दुई ग्रुप भएर त्रियुगा नगरपालिका वडा नं. ३ र १० मा गरेको एक अध्ययनले ८ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या निरक्षर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विद्यार्थीहरुले एक महिना लगाएर गरेको अध्ययन अनुसन्धान त्रियुगा नगरपालिकामा प्रस्तुतीकरणमा सो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको थियो । विद्यार्थीहरुले ६ सय घर परिवारको सदस्य गरी २ हजार ३०३ जनामा गरेको अध्ययन अनुसन्धानले ९८ महिला र ८८ पुरुष गरी १८६ जना निरक्षर रहेको तथ्याङ्क देखिन्छ । सुगममा रहेको ठाउँका महिला तथा पुरुषहरुको अवस्था यो छ भने दुरदराजमा रहेका परिवारहरुको शैक्षिक अवस्था कस्तो होला प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
यस्तै कटारी नगरपालिका ४ बैरेनी स्थित श्री देवी आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत १२ विद्यार्थीलाई कखरा समेत आउँदैन । क,ख,ग,घ,ङ मा आएपनि त्यसपछिका शब्दहरु समेत नआएको पत्रकार अभिमन्यू लामिछानेले बताए ।
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको १२ वटा मापदण्ड उदयपुरले पुरा गरेको भन्दै साक्षर घोषणाको सवै तयारी पुरा भएको भनि जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खड्गबहादुर परियारले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा साक्षर जिल्ला घोषणाका लागि १५ देखि ६० बर्ष उमेर समुहका ९५ प्रतिशतले आफु र आफ्नो परिवारको नाम लेख्न, हस्ताक्षर गर्न, सामान्य हिसावकिताव राख्न सक्ने भएकोले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न लागिएको बताए ।
त्यसैगरी मोवाईल र क्यालकुलेटरबाट अंक र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्न, १ देखि १ सयसम्म गणना गर्न, घडी हेरेर समय बताउन, भित्तेपात्रो हेरी तिथिमिति बनाउन जस्ता कार्य गर्न सक्नु पर्दछ । केन्द्रले तोकेको मापदण्डभन्दा १ दशमलव ३२ प्रतिशत बढि साक्षर भईसकेको परियारले बताए ।
तथ्यांकअनुसार जिल्लामा ९६ दशमलव ३२ प्रतिशत सर्वसाधरण साक्षर भईसकेको उनले बताए । जिल्लामा १५ देखि ६० बर्ष उमेर समुह १ लाख ७४ हजार १ सय ८ जना रहेकामध्ये हालसम्म १ लाख ६७ हजार ७ सय ६ जना साक्षर भईसकेका छन् भने बाँकी ६ हजार ४ सय २ जनालाई आगामी १ बर्षभित्रमा साक्षर बनाई सक्ने लक्ष्य लिइएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख हरिहर धिताल जानकारी दिए ।
यो तथ्यांक शिक्षा कार्यालयले आफु मातहतमा रहेका निकायबाट घरधुरी सर्वेक्षण गरी तयार पारेको धितालले वताए । तर, अहिले पनि उदयपुरमा मुसहर समुदायका करिव ८० प्रतिशत भन्दा बढी बालबालिका विद्यालय क्षेत्र बाहिर रहेका छन् । भने दलित, गरिव विपन्न परिवारका बालबालिकाहरु पनि विद्यालय क्षेत्रको पहुँचबाट बाहिर रहेको देखिन्छ । यस्तै केही समुदायका प्रौढ महिलाहरुलाई अहिले पनि सामान्य अक्षर समेत चिन्ह सक्ने अवस्थामा छैन र उनीहरुलाई आउँदैन् पनि । यस्तै भौगोलिक हिसाबले पहाडी क्षेत्रका बालबालिका पनि टाढा–टाढा छरिएर रहेका गाउँबाट घण्टौं हिँडेर विद्यालय जानुपर्ने यहाँका बालबालिकाहरुको दैनिकीले गर्दा समेत निरक्षर रहेको देखिन्छ ।
साक्षर जिल्ला घोषणाका लागि उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेल गाईघाट आउने भएको छ । साक्षर जिल्ला घोषणा फागुन ५ गते त्रियुगा नमूना माविमा हुने कार्यक्रम रहको जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समिति उदयपुरले जनाएको छ ।